Zonke izingane zithande ukuba agqoke up futhi uguqule ibe nezinhlamvu lwasemaphusheni nezilwane magic. Ngakho, kungani ungahloli sibasiza? igqoka Fancy ukulingana nganoma yisiphi amaholide nesithombe amahlumela. Okuhle kunakho konke ukuthi - eningi kubo kungenziwa ngesandla. Unentshisekelo kangakanani ukwenza Carlson imvunulo? elula kakhulu, wena nje - imiyalelo yethu eningiliziwe.
abagqoke kanjani Carlson?
Ngesisekelo suit kuyoba iyiphi ihembe noma turtleneck afake nebhulukwe / ibhulukwe ne suspenders. Okuhle kunakho konke ukuthi, uma kuwukwenza checkered noma ezimthende. Kodwa akukho okubi kakhulu ukwedlula ngalokho okwenzeka kuma-ihembe bright monochromatic. Ingxenye engezansi suit - ibhulukwe ne suspenders. Ungathatha suit ngomumo eyenziwe noma thunga / Bopha ibhande kuya jeans evamile noma nebhulukwe. Uma leyo ngane izokwazi mncane kakhulu, kungenzeka ukwandisa umthamo umzimba esiswini eyayenziwe - fishnet crummy e ungqimba ukwahlukanisa. Carlson imvunulo kungaqedwa izicathulo elikhanyayo. Makube izicathulo ezinemibala noma amateki nge izintambo zezicathulo okungafani.
We khiqiza bendiza ekhaya
Khumbula isisho okubanjwa ikhathuni mayelana yabalingisi nge motor? Uma unquma ukwenza Carlson imvunulo ngezandla zakho, ungakhohlwa mayelana bendiza.
Indlela elula yokwenza it out of amakhadibhodi. Dweba iphathini okusaqanda udwani wanquma ezine ezifanayo isesimweni elementi umbala amashidi ezahlukene amakhadibhodi. Lungisa nabo kwi-round isizinda, kungenziwa nje ethe njo. Uma ufuna ukwenza bendiza ezithathekayo, usebenzisa wire and ubuhlalu. Alternative - ukuthatha izingxenye ubudala-non-ukusebenza fan. Futhi, izindwani zinsale wire futhi wambozwa Indwangu. bendiza Ready kufanele ithungwe ukuba suit, noma ukubeka ngemuva, okwenza ezizibeni baby. '
Izesekeli ukwakha isithombe
Isudi Carlson sika uyobheka umbukwane, uma ukwelekelela ngayo iwigi abomvu. Ekhaya, izinwele yokufakelwa zingenziwa ntambo noma ngentambo. Cabanga inketho iwigi okunamathiselwe - kungaba nokunwebeka noma hairpins, evumela izinwele obuphelele wengane. An engavamile, kodwa akukho esingaphansi ezithakazelisayo umqondo - ukwenza iwigi aphume ubudala ukubhukuda CAPS noma izigqoko ukwenzela ukungena okuncane kakhulu wathungela. Kulokhu, esekelwe imicu elandelayo Sew izinwele bokuzenzela noma ngentambo.
Ukukhiqiza imvunulo Carlson ngezandla zakho, ungakwazi ukuhlobisa it njengoba usebenza. Thunga ku nezimagqabhagqabha isudi enombala, kungaba futhi inkinobho phezu kwesifuba. Inketho engcono - isicelo encane nge squeaker ngaphakathi, okungase agxishiwe. Futhi, inkinobho kungenziwa amelelwa isithonjana encane isiyingi noma ubuhlalu ezinkulu. Ngaphambi photoshoot noma Matinee ukudweba ipensela lakhe kancane Carlson freckle yezimonyo. Phelelisa ngendlela samaholide kungenzeka, unikezwa isikhathi sonyaka kanye isihloko umcimbi. Ngokwesibonelo, New Year imvunulo Carlson uyobheka zemikhosi futhi kumnandi, uma ungeza kancane tinsel nemvula. Futhi ngaphezu entwasahlobo in Matinee babiza buttonhole izimbali yokufakelwa.
Indlela yokwenza imbali aphume ibhodlela plastic
Kanjani ukuba babhale indaba, "Kuyini art?" Iziphi izimiso ukulandela futhi bathobele isilebhuli
Ichibi Hepojärvi: incazelo, izici zemvelo, ukuzijabulisa
Blue Lakes of Altai - indawo ephelele uphumule
Ukusebenzelana amadada: izinhlobo kanye namagama. Wild Duck River
Golden ukukhiqizwa kabusha rybki- nokunakekela